Play Streets - Transportation | seattle.gov
Xiritaanka ku meel-gaarka ah Miiska Ruqsada
Si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaheena iyo macaamiisheena, loona caawiyo yareynta saameynta COVID-19, waxaan xirnay miiskeena adeega macaamiisha ee dadweynaha maalinta Isniinta, Maarso 16, 2020. Miiskeena wuu xirnaan doonaa ilaa ogaysiis kale. Tani waxaa ka mid ah miiskaska ruqsada Adeegsiga Wadada iyo Saxmada iyo Baarkin dhigashada ee Seattle Municipal Tower (Dhismaha Dawlada Hoosee ee Seatle) ee dabaqyada 23aad iyo 37aad. Waxaan wali ka shaqeynaa codsiyada ruqsada.
Waxaad ku soo gudbin kartaa codsiyada dhammaan noocyada ruqsadaha khadka tooska ah adoo adeegsanaya Portal Services Seattle (Bogga Websaytka Adeegyada Seattle).
Shaqaalaheena waxaa lagu heli karaa taleefan si ay u bixiyaan tababaro codsi ah ugana caawiyaan bixinta rukhsadaha Adeegyada tarjumaadda ayaa loo heli karaa iyada oo bilaash ah dadka soo wacaya.
Ku ciyaaritaanka wadada waa hab madadaalo oo sahlan oo lagu dhiso bulshada laguna barto deriskaaga. Iyadoo la mid ahayn xalfada xaafad ahaaneed, ku ciyaaritaanka wadada waxaa lagu martigelin karaa qaab soo noqnoqda, illaa 3 maalmood usbuucii ugu badnaan 12 saacadood asbuucii. Waxaad ku martigalin kartaa ku ciyaaritaanka wadooyinka wadooyinaan halbawla ahayn ee magaalada dhexdeeda – xitaa gurigaaga banaankiisa! Waxa ugu wanaagsan oo dhan, rukhsaddu waa bilaash.
Kaliya raac talaabooyinkan fudud:
Tallaabada 1: Bilaabidda
Xaqiiji in ku ciyaarida wadaadu ay tahay:
Bilaash oo u furan dadweynaha guud
Wax ka weyn hal dhagax dheerar oo aan ku jirin isgoyska
Oo ku yaala waddo aan halbawlo ahayn. Waxaad kaheli kartaa nooca wadaada halkan
Haddii aysan lahayn xariq—dhibco ama dhagax—oo wadada dhexdeeda ah ah, waxay u badantahay inay tahay waddo aan halbawlo ahayn.
Khariidada kor ku lifaaqan ayaa u tusinaya wadooyiinka aan halbawlaha ahayn sidii cawl kuwa halbawlaha ahna midabo kale
Ma aha waddo ay basasku maraan ama dariiqa gaadiidka gurmadka ah
Waxaa loo qorsheeyey inay dhacdo inta udhaxeysa 9:00 AM - iyo maqrib (ama ilaa 9:00 PM haddii fiidkii ay ka dambeyso intaas), oo ay ku jiraan dejinta/nadiifinta.
Markaad qorsheyneyso dejinta dhacdadaada:
Qalabka ku ciyaarida wadada dhexdeeda waa inay fududahay in isla markiiba la qaadi karo haddii loo baahan yahay wado degdeg ah
Iibiyeyaasha, gawaarida cuntada, boostaajada ku meel gaarka ah, guryaha jilicdasan, ama dhismayaasha kale looma oggola ruqsadan.
Talaabada 2aad: Ka qeyb geli deriskaaga
Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad laxiriirto deriskaaga kahor intaadan dalban rukhsad, adoo maanka ku haya kala fogaanshaha bulshada iyo hagitaanada badqab ahaaneed ee kale ee COVID-19. La shaqeynta deriskaaga waqti hore waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad xulato taariikho aan khilaafsanayn deris kale, oo laga yaabo inay u imaanayaan marti ama mashruuc dhisme oo isla maalintaas la qorsheynayo oo gaadiid dheeri ah kuu keeni doonta wadadaada. Waxaad sidoo kale aqoonsan kartaa dadka awooda inay tabaruc u sameeyaan si ay kaaga caawiyaan in munaasabadaadu noqoto mid guuleysata! Waxaad u isticmaali kartaa xaashida albaabka ka laalaada iyo xaashi ogaysiis ah si aad ugu wargeliso deriskaaga.
Haddii aad qorsheyneyso inaad kula xiriirto deriskaaga iimayl ama khadka tooska ah, waa kuwan tusaale ahaan iimayl ama boostad aad u adeegsan karto:
Tusaalaha iimaylka ama boostada
Waan ku salaamay!
Waxaan ka codsanay ruqsada Play Street (Ku Ciyaarida Jidka) Seattle Department of Transportation (Waaxda Gaadiidka ee Seattle) in la xiro wadadeena si loogu baashaalo banaanka lagu jimicsado! Waxaan qorshaynay inaan raacno Hagitaanka Caafimaadka Dadweynaha iyo mida Gobalka in la ilaaliyo kala fogaanshaha iyo badqabka kaqeybgalayaasha. Xiritaanka waddada ayaa kaliya ku xaddidi doonta gaadiidka. Dhammaan gaadiidka maxalliga ah, oo ay ku jiraan deriska, booqdayaasha, gaadiidka keenista, iyo gawaarida gurmadka, ayaa wali awoodi doona inay galaan wadada. Waxaan ka fikireynaa inaan codsanno (maalin/maalmo usbuuc ah) inta udhaxeysa (waqtiga bilowga) iyo (dhamaadka waqtiga), laga bilaabo (taariikhda) kuna eg (taariikhda).
Kahor intaanan gudbin codsigaaga, waxaan jeclaan lahayn inaan ogaano sidaad u aragto fikraddan iyo inaad qabto wax su'aalo ah oo aan ka jawaabi karno. Fadlan nala soo socodsii (taariikhda) haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah ka qabtid arrintan. Waxaad nagala soo xiriiri kartaa (cinwaanka iimaylka iyo/ama lambarka taleefanka).
Talaabada 3aad: Codso ruqsadaada bilaashka ah
Waxaad ubaahantahay inaad isku daydo inaad soo gudbiso codsigaaga ugu yaraan 14 maalmood kahor dhacdadaada koowaad.Markaad diyaar u tahay inaad codsato, naga soo wac lambarka (206) 684-7623. Shaqaalaheena ayaa kaa caawin doona inaad dalbato ruqsadayada bilaashka ah. Tarjumaad ayaa lagu heli karaa si bilaash marka la soo waco!
Tilaabada 4aad: Diyaari inaad xirto wadada
Bixi xayndaabyo iyo calaamadaha xirnaanshaha waddadaada. Waxaan u samaynay qaab si aan kaaga caawino inaad dhigtid xayndaabkaaga iyo calaamadahaaga meelaha ku habboon.
Qaabka xiritaanka Play Street –xiritaan buuxa
Qaabka xiritaanka Play Street –xiritaan nus ah
Waxyaabaha Aasaasiga ah ee Xanibaada
Dhammaadka xiritaankaaga, dhig xanibaada aan ka badnayn 6’ oo ku xir iyaga bac ama xarigga
Dhig xanibaada gadaasha laamiga si ay ugu fududaato dadka inay ka gudbaan wadada
Haddii aad ku dhowdahay waddo aan halbowle ahayn, waad isticmaali kartaa Nooca 3aad xanibaadaha(baaris degdeg ah oo internet ah ayaa ku tusi doonta meelaha qaarkood ee aad kireysato ee Nooca 3aad xanibaadaha).
Haddii aad ku dhowdahay waddo aan halbowle ahayn, waad isticmaali kartaa Nooca 2aad xanibaadaha ama alaabada guryaha sida baaldiga qashinka shaqsiyadeed ama alaabta guriga oo dhererkoodu yahay ugu yaraan 3 fuudh dheerar iyo 2 dhudhun oo ballac ah.
Arag tusaalooyinka Nooca 2aad iyo Nooca 3aad ee xanibaadaha wadada korka shaxankayga(adaya)
Calaamadaha, sidoo kale!
Dhig calaamada “STREET CLOSED” “WADO XIDHAN” bartamaha wadada.
Cabirka calaamada loo baahanyahay ee “STREET CLOSED” WADO XIDHAN” waa 36″ x 24″. Waa kan nooc PDF ah ee calaamada ah inaad adigu iska u daabacato ama kasoo daabacato dukaanka daabacaadda. Haddii aadan ku daabicnayn dukaanka daabacaadda oo aadan haysan daabacad ku daabici karta cabirkan, weli waxaad ku daabici kartaa PDF tan, laakiin waxay u baahan doontaa inaad soo ururiso calaamada. Waxaad ka heli kartaatilmaamaha sida loo daabaco calaamada isu imaatanka halkan.
Ku dhejiCalaamadaha Caafimaadka Dadweynaha ee King County signsalbaabada laga soo galo labada dhinac ee xiritaanka wadada.
Daabac calaamado macluumaad ahaaneedsi loogu wargaliyo dadka kale sababta wadadu u xirantahay.
Calaamadaha waa in lagu dhejiyaa xayndaabka ugu yaraan hal talaabo ka sareyso dhulka si ay si fudud darawallada ugu arki karaan.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u hesho xayndaabyada ku habboon ama calaamadaha waddadaada, waxaa laga yaabaa inaan ku siino caawimaad. Fadlan naga soo wac (206) 684-7623 si aad wax dheeraad ah uga ogaato. Adeegyada tarjumaadda ayaa lagu heli karaa bilaash!
Tallaabada 5aad: Si ammaan ah u xir waddadaada oo ku baashaal!
Way adag tahay in la baashaalo haddii aad ka walwalsan tahay nabadgelyada carruurtaada iyo saaxiibbadaada, markaa hubi inaad xirto waddada intaadan bilaabin! DHig xayndaabyada ito calaamadaha. Ku raacsan qofka weyn (dadka waaweyn) ee kormeeraya xayiraadaha. Ugu yaraan hal qof oo qaangaar ah waa inuu jooga xanibaada iyo goobta ciyaarta labada waqti kasta si uu dhaqso ugu qaado xayiraadaha taraafikada maxalliga ah. Xusuusnow - marin u helitaanka maxalliga ah, keenista, iyo gawaarida gurmadka ayaa loo oggol yahay inay galaan xiritaanka. Guusha barnaamijka iyo nabadgelyada deriskaaga waxay ku tiirsan tahay martigaliyayaasha inay feejignaadaan kana jawaabida baahidooda.
Qeyb dabka oo 20-foot 20-talaabo ah waa in la ilaaliyaa markasta, sidaa darteed qalabka fudud ee la qaadi karo oo keliya waa inuu yaalaa wadada. Shey kasta oo weyn oo aan si fudud loo qaadi karin looma ogola wadada ama dhinaca wadada. Taasi waa sababta aynaan u oggolaan guryaha jilicdasanruqsadan.
Hagaag, HADA waa waqtigii baashaalka!
Tallaabada 6aad: Nadiifi oo ka qaad xannibaadaha
Marka ciyaarta waddo dhammaato, fadlan hubi in waddadu ka madhan tahay qalabka ciyaarta iyo haraaga hawl kasta. Nadiifintu waa hawl aad u wanaagsan in lala wadaago dhammaan carruurta ka qayb qaadatay! Hubso inaad ka qaaddo xayndaabyada iyo calaamadaha oo aad dib u furto wadada si loo maro saxmada darteed.
Waxaan jeclaan laheyn inaan kaa maqalno hadaad jeceshahay inaan wadaagno waxa si fiican u dhacay, fikradaha hormarinta, ama sawirada dhacdadaada. Xor ayaad u tahay inaad noogu soo dirto iimayl atpublicspace@seattle.govor ama nagusoo lifaaq barta Twitter-ka @ SeattleDOT!